25 नारा र त्यो पहिले र पछिको चिन्ह लगाइएको छ क्रिएटिव अनलाइन
उत्पादन वा कम्पनीको नाराले विज्ञापन अभियानलाई उन्नत गर्न सक्दछ वा यसलाई मध्यम बनाउँदछ। यो एक मौलिक तत्व, एक वाक्यांश हो कि सम्पूर्ण मा समेट्छ हाम्रो उत्पाद र कम्पनी र दर्शनको सार त्यो यसको वरिपरि छ। यसको मुख्य कार्यहरू हुन् ध्यान खिच्नुहोस् र एक वैचारिक सम्बन्ध स्थापना गर्नुहोस्। यो दोस्रो पहिलो जत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ किनकि हामीले यो कुरा मनमा राख्नुपर्दछ कि हाम्रा उपभोक्ताहरूले हाम्रा उत्पादनहरूमा खोज्ने गुणहरू वा चीजहरू प्रायः भौतिक हुँदैनन्। कहिलेकाँही यो मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक वा सामाजिक मुद्दा हो। कि ती यी मूल्यहरू वा विचारहरू हाम्रो ब्रान्डसँग सम्बन्धित छन् जुन हाम्रो लागि धेरै अनुकूल हुनेछ।
थप रूपमा, नाराले प्रक्रियाको प्रभावकारितालाई असर गर्छ, किनकि यसको लागि धन्यवाद यो धेरै हुनेछ प्रयोगकर्ताहरूलाई ब्राण्ड याद गर्न सजिलो छ, एक आकर्षक गीत वा वाक्यांशको साथ हामीले कामको राम्रो भाग गरेका छौं। यो एक शुद्ध रुपले मनाउने तत्व हो, जसले अन्ततः उत्तर वा उत्तर खोज्दैन। उसले खोजेको कुरा जनताको स्मृतिमा रेकर्ड गरिएको छ यो सरल र छोटो छ, धेरै राम्रो।
यहाँ केहि प्रसिद्ध प्रख्यात नारेहरु छन् जसले सबैभन्दा बढी प्रभाव पाएको छ।
कोका-कोला: खुसी खुशी।
नाइक: बस यो गर्नुहोस्।
भोडाफोन: तपाईंलाई पावर (तपाईंलाई पावर)।
बर्गर किंग: यो तपाईंको मार्गमा राख्नुहोस् (जस्तो तपाईं चाहनुहुन्छ)।
म्याकडोनाल्ड्स: म यो माया गर्दैछु। (धेरै मन पर्यो)।
भोइसराय: यो मसँग छैन, जो म हुँ।
म्याक: फरक सोच्नुहोस्।
Movistar: साझा, जीवन अधिक छ।
ल ओरेल: किनकि तपाई यसको लायक हुनुहुन्छ।
नोकिया: मान्छे जोड्दै।
बीएमडब्ल्यू: के तपाई ड्राइभ गर्न चाहानुहुन्छ?
कोलोन: वरपर किनमेल गर्नुहोस्, तुलना गर्नुहोस् र यदि तपाईंले केहि राम्रो फेला पार्नुभयो भने, यसलाई खरीद गर्नुहोस्!
IKEA: तपाईको घर स्वतन्त्र गणतन्त्रमा स्वागत छ।
किट क्याट: ब्रेक गर्नुहोस्, किट क्याट राख्नुहोस्।
Heineken: हरियो लाग्छ।
Wipp: यो रब्ब समाप्त हुँदैछ।
मास्टरकार्ड: त्यहाँ केहि चीजहरू छन् जुन पैसाले किन्न सक्दैन। अरू सबै कुराको लागि, मास्टरकार्ड।
बदाम नौगट: क्रिसमसको लागि घर आउनुहोस्।
Durasel: र तिनीहरू अन्तिम, र तिनीहरू अन्तिम र तिनीहरूले अन्तिम ...
बीएमडब्ल्यू: पानी होस्, मेरो साथी।
इकोविड्रियो: कि त तपाईं रिसाइकल गर्नुहुन्छ, वा तपाईं स collect्कलन गर्नुहुन्छ।
ओर्ल्यान्डो: केटा, यहाँ टमाटर छ।
एडिडास: असम्भव केहि पनि छैन
सडक सुरक्षा: यदि तपाईं पिउनुहुन्छ भने ड्राइभ नगर्नुहोस्।
ग्रिडिंग: महँगो, तर सबै भन्दा राम्रो।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » प्रेरणा » २ Slo नारा र यो पहिले र पछिको चिन्ह लगाइएको छ
मार्को गोमेज भन्यो
कुनै चकलेट पूल स्लोगनहरू!
मार्को गोमेजलाई जवाफ दिनुहोस्